Manipulation diabolique | news2dago |
news2dago 09 Febroary, 2009 08:37 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Rano raraka an-tany
Manakory aby ianareo tompoko, mamangy amin’ny fahoriana tompoko. Tsy lahatry ny miankandrefam-baravarana izao fa hetraketrakin’ny mpanao politika. Antontanio Ratsiraka : iza no namono ny olona tamin’ny 10 aogositra 1991 ? Voatery nitifitra ny miaramila rehefa notarihina hananika an’Iavoloha ny vahoaka aman’alina. Iza no tompon’andraikitra tamin’ny fahafatesan’ireny maty tamin’ny 10 aogositra ireny : Ratsiraka sa ny Hery Velona ?
Vahotra tokoa ny lela raha, 18 taona aty aoriana, voatery mamerina ny fanontaniana sy ahiahy rehetra efa nosoratako tao amin’ny Madagascar Tribune («Ni Iavoloha, ni 13 mai», 12 août 1991). Fa voaozona inona loatra ny mpanao politika malagasy no tsy mahita irika afa-tsy ny fanaovana sorona ny olona ? Tamin’iny 10 aogositra 1991 iny, mbola niala nenina nampitandrina ny olona tonga teny Tanjombato ny Praiministra Razanamasy : «aza mandingana mihoatra eto ianareo fa raharaha ny ao aloha ao». Tsy nisy nihaino azy. Impiry impiry, hatramin’ny nanombohan’izao raharaha izao, no nitsangana sy niteny ny olona maro sady tsy momba ny atsy no tsy momba ny aroa : «mampidi-kizo izao fiziriziriana izao, tsy maintsy ny resaka no vaha-olana». Tsy misy nihaino isika.
Tsy fomban-tany, na aiza na aiza, na oviana na oviana, izany hoe manani-drova. Faha-Mpanjaka dia voaheloka ho faty izay milingilingy amin’izany. Raha nijanona teo amin’ny kianjan’ny 13 mey ny kabary sy ny fanambarana isan-karazany, tsy ho nisy izao rà mandriaka izao. Anontanio ny any Eoropa sy Amerika raha tojo vahoaka an’alina mananontanona ny lapam-panjakana ka mikasa hanao amboletra hiditra ao : ho jerem-potsiny ? Ka inona intsony no maha Fanjakana ny Fanjakana ?
Hatramin’ny 1972 dia ny faty olona no fetran’ny fitondrana. Efa diso hay loatra izany. Lasa tetika politika. Nahazera an’i Tsiranana. Nahalavo an-dRatsiraka. Izao mahasolafaka an-dRavalomanana izao. Kizo ho an’ny vahoaka, kendry tohana ho an’ny mpitondra, tsiny ho an’ny mpanohitra. Mbola mafana ny fo, mbola mamaivay ny fery, saingy teny tsy maintsy atao izao, zokin’izay aoriana rehetra, mba sanatriavina ka tsy ny fanaovana sorona ny olona foana no handrombaham-pahefana eto Madagasikara.
Ilay Filoham-pirenena, tsy hita, tsy nandrenesam-peo, mahabe ahiahy ny olon-tsotra manara-dalàna sady tsy tia korontana. Raha mba miteny indray, lavitra loatra, toa zary miafina, sanatria toa efa lositra. Fa Fanjakana inona loatra ity eto amintsika ity ? Tompon’andraikitra amin’ny haja sy voninahitra fotsiny fa mialangalana rehefa misy fahasahiranana ? Ianao ihany, Ravalomanana, no nihomehy ilay mpiandry omby miandry omby tokana : «tsy fantatra intsony, hoy ianao, iza no sefo, izy sa ilay omby». Mbola sefo ve ianao, Ravalomanana ?
Vaovao farany dia nametram-pialana ny minisitrin'ny fiarovam-pirenena. Ary andrasana etsy @ kianja mitafo ny mahamasina ireo soronan'ny tolom-bahoaka 2009. Tsy mbola misy resaka hidirana any @ marimaritra iraisana mihitsy hatreto.